गगन थापाले त्याे 'ओलीवेशन', याे 'अधिवेशन' भन्नुको के छ कारण ?
गगन थापाले त्याे ‘ओलीवेशन’, याे ‘अधिवेशन’ भन्नुको के छ कारण ?
काठमाण्डाै – नेपाली का‌ंग्रेसका नेता गगनकुमार थापाले ‘ओलीवेशन’ र अधिवेशनको फरक नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनले दिएको बताउनुभएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनमा सभापतिका उम्मेदवार डा. शेखर कोइरालाले आज बुधवार आयोजना गर्नुभएको प्रतिनिधिहरूलाई धन्यवाद कार्यक्रममा बोल्दै नेता थापाले ओलीवेशन र अधिवेशनको फरक नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनले दिएको बताउनुभएको हो ।
उहाँले एमाले अधिवेशनमा अध्यक्षले गोजीबाट नाम निकालेर पढेको तर कांग्रेसको अधिवेशनमा स्वयम् प्रधानमन्त्री नै रातभर बसेर मतदातालाई हात जोडेको दृश्यले अधिवेशनको बारे स्पष्ट पार्ने बताउनुभयो ।
नेता थापाले सभापति देउवाले अब नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई गुटरहित बनाएर सही दिशा दिनुपर्ने बताउनुभयो । नेता थापाले भन्नुभयो, ‘हिजो करिब–करिब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू चुनावकाे प्रारम्भदेखि अन्तिम मत हाल्ने बेलासम्म त्यस्तो चिसो स्याँठ चलेको बेलामा पहिला कोट, कोटमाथि ओभरकोट थपेर भए पनि पाँच घण्टा लाइन लागेर बस्नुभयो ।
एक–एक मतदातालाई हात जोड्नुभयो । सेल्फी खिच्नुभयो । यस्तै अधिवेशन केही समयअघि नारायणीको किनारमा पनि भएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री त्यो बेलामा सानले एउटा रिसोर्टमा बस्नुभएको थियो ।
अरू सबै नारायणी किनारमा घाममा सेकिएर बसेका थिए । कतिखेर निस्कनुभयो, बगलीबाट एउटा लिस्ट निकाल्नुभयो, पढ्नुभयो, सुनाइदिनुभयो, अधिवेशन सकियो । तर हाम्रो अधिवेशनको फरक बहालवाला प्रधानमन्त्री पनि सडकमा आउनुपर्‍याे, हात जोड्नुपर्‍याे, मत माग्नुपर्‍याे । त्यो मैले भन्ने गरेको ओलीवेशन र अधिवेशनको फरक यही नै हो ।’
नेता थापाले अब पार्टीका नेताहरू सबैको सभापति शेरबहादुर देउवा भएको बताउँदै पार्टीमा आफ्नो सम्बन्ध, सङ्घर्ष र सहकार्यको हुने बताउनुभयो । उहाँले पार्टी सभापतिको कुनै गुट नहुने भन्दै नवनिर्वाचित सभापति देउवालाई त्यहीअनुसार अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो ।